Wararka - Mood sameeyayaashu waxay diiradda saaraan qorista jiilka soo socda
QAADASHO BADAN OO KOOBAN
DHAQASHADA YAR EE YAR
QALABKA MISSIGA IYO KHADARKA
LSR & MUBASHADA MISE
Horumarinta Wax soo saarka
SOO SAARIDDA CUDURKA
Soosaarka LSR & Rubber
Kuwa wax sameeya waxay diiradda saaraan qorista jiilka soo socda
Sida ururo ganacsi oo kale oo badan, Ururka Wax Soosaarayaasha Moodada ee Shiinaha ayaa sidoo kale bilaabay mashaariic loogu talagalay soo jiita jiilka soo koraya.
Maanta, qorista jiilka soo socda ee shaqaalaha waxay noqotay mudnaanta koowaad ee soosaarayaasha Shiinaha. Waan ogahay inay taasi u egtahay hadal-hayn. (Da'dayda, aad baan u ogahay waxa loo yaqaan 'clichés'. Tani waxay sidoo kale cadeyneysaa inaan duq ahay oo aanan ka sii mid aheyn "jiilka soo socda".) Warshada caaryada ee Shiinaha, way adagtahay in la arko dhalinyarada dhashey kadib 95, waana waliba foolxumo. U tag farabadan tababbarka caaryada oo raac sayidka si aad u barato isku-darka caaryada iyo wax soo saarka caaryada. Muuqaalkani wuxuu had iyo jeer ku sii jiri doonaa xusuusta kuwii dhashay 1980-yadii.
Jiil tobannaan sano oo khibrad shaqo ah si tartiib tartiib ah uga fariistay, warshadaha balaastikadu sidoo kale waxay bilaabeen inay noqdaan "duq". Isbeddelkani wuxuu ugu deg deg badan yahay dhinaca wax soo saarka caaryada. Soo-saareyaasha caaryadu waxay si deg-deg ah ugu baahan yihiin inay helaan shaqaale dhallinyaro ah oo ay ku sii hayaan wershadan. Halkaas waxaa laga arki karaa in xilligan maanta ay ku yar yihiin shaqaale xirfadlayaal ah, in weli loo tixgelin doono inay yihiin dhalinyaro 40 jir ah! Haa, 40 jir hadda wuxuu u dhigmaa 20 sano jir…
Intaa waxaa dheer, ururo kale oo ka shaqeeya warshadaha caaryada ayaa sidoo kale si adag uga shaqeynaya sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen jiilka xiga ee isboortiga.
Intaa waxaa dheer, waaxda heer-kulinta ee Jaaliyadda Shiinaha ee Injineerada Plastics waxay aasaaseen deeqo waxbarasho waxayna si adag ugu hawlan yihiin qorista dhalinyaro badan si ay ugu biiraan guddiga agaasimayaasha. Tartan hal-abuurnimo ah oo ka socda Shirka Thermoforming ee 2018, gaariga raadiyowga lagu kontoroolo ee loogu talagalay kaqeybgaleyaasha ardaygu wuxuu adeegsaday jir midab leh oo heerkulbeeg leh-kaas oo aad uga wanaagsan kan hadda taagan "Tartanka qaab-dhismeedka ardayda"
Kulankii sanadkii hore, waaxda kuleylka waxay sidoo kale abaabuleen dood kooxeed oo ku saabsan qoritaanka shaqaalaha da'da yar "raadinta unicorns" -Waxaan rajeynayaa in shaqaalaha da'da yar ee aadka ufiican ay sahlanaan doonto helitaankooda marka loo eego unicorns quraafaadka.
Qoritaanka jiilka soo socda ee shaqaalaha waa dhibaato muddo dheer ah, heerka shaqo la'aanta aadka u hooseysa ee maanta ka jirta Shiinaha ayaa waliba ka sii xun. Xallinta dhibaatadan waxay u baahan doontaa tallaabooyin joogto ah oo cusub.
Waqtiga boostada: Dec-01-2020
Xafiiska ShenZhen: Maya 1113, Hengping Dong Road, Yuanshan Street, Degmada Longgang, Magaalada Shenzhen, Gobolka Guangdong, Shiinaha.
Cusbooneysiinta alaabada ee wajiga COVID-19
COVID-19 In kasta oo laga naxo, waqtiyada dhibaatada ...
Kuwa wax sameeya waxay diiradda saaraan qorista tan xigta ...
Sida ganacsiga warshadaha kale oo badan oo ...
Codsiga caaryada silikoon LSR dareeraha ah
Jellada dareeraha ah ee loo yaqaan 'Liquid silica gel' ayaa loo soo gaabiyaa LSR, ...